AKHRISO: Maxay Midowga Musharixiintu ka yiraahdeen heshiiska Golaha Wadatashiga Qaran? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
AKHRISO: Maxay Midowga Musharixiintu ka yiraahdeen heshiiska Golaha Wadatashiga Qaran?
January 10, 2022 Xuseen 1
Midowga Musharixiinta Madaxweynaha DFS ayaa soo dhoweeyay go’aanadii kasoo baxay Shirka Golaha Wadatashiga Qaran, kuwaas oo la xariira dardargelinta Doorashooyinka dalka.
Midowga Musharixiinta ayaa ugu baaqay Madaxda Dowladaha xubnaha ka ah DFS, inay is waafajiyaan habraacyada doorashada, iyo hab-dhaqankooda.
Ra’iisul Wasaaraha XFS ayay ugu baaqeen Midowga Musharixiintu inuu dul joogteeyo dhaqangalka heshiiska, hufnaanta doorashada, xorriyada mudaharaadyada iyo in warbaahinta Qaranka loo ogolaado musharixiinta.
“AMISOM duuduub hannoola wareegto madaxtooyadaan isku dilaynaaye, waayo ciidan amni malihin”, waa qodob ka mid ah warqaddii madasha ka soo baxday!!!!!
Haddii ay soo dhoweyntu daacad ka tahay, oo sida ay sheegeen la qaatay inta badan talooyinkoodii, waa maxay waawarayda & kacdoonada “qabiilaysan” ee ay Xamar ka abaabulayaan, ee hal ku dheg looga dhigay “Farmaajo madaxtooyadeena ka soo bax waa kalkeeniiye”?!
Marka aan u soo noqdo, way caddahay in hoggaamiyayaasha maamullada aysan jirin cid ka “madaxbannaan” oo kula xisaabtami karta malxiisayntooda oo ay halkeedii ka miisayaan. Waxaaba dhaamay wajigii hore ee ay malxiisaynta & caruusayntu ku socotay waayo markaa waxaa jiray guddiyo lagu tilmaamay in ay “madaxbannaan yihiin”, laakiin hadda guddiyaba ma jiraan oo lama xusin xitaa sida laga yeelayo.
Waxaa guddiyada kala diray ra’iisal wasaarihii hore oo hoosgeeyey xafiiskiisii hore, isaga oo aan cidna kala tashan. Marka, madaxbannaani iska daaye saw maaha ka dar oo dibi dhal. Saw sidii hore ma aysan dhaamin? Iyaga oo aan la kala dhantaalin oo la farafarayn saw looma joojin waayin; yay hadda aarbiitare u noqon karaan iyaga oo nin iska magacawday? Saw guddigii Rooble la odhan maayo?
Marka aynu halkaa malxiisaynta uga baxno, waxa aan arkayey nimankan warqadda soo saaray abaabul ay Muqdisha ka wadaan. Nimankii abaabulka u qaabilsanaa waxaa hormuud u ahaa rag uu ka midyahay Mr. Fiqi. Hadaladiisii yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa, “waddanku hal dawlad buu leeyahay, oo wasiirka amniga ayaa oggolaansho noo siiyey kacdoonka qabiilaysan, laakiin waddanku madaxweyne malaha!”
Fiqiyoow, haddii uusan waddanku lahayn madaxweyne, ra’iisal wasaarena malaha wasiir amnina malaha oo waaba idinka AMISOM xoojiyey, taas oo la mid ah ciidamadeena kuma kalsoonin. Sidaa daraadeed, cida kaliya ee mandaydkeedu shaqaynayo waa “maamulka gobolka Banaadir”. Haddaad tiraahdeed ciidan majiro oo madaxweyne majiro, taas micnaheedu waa dawladi majirto, waana “qaran dumisnimo”.
Waa ayo marka cidda ka amarqaadanaysa wasiir amni & ra’iisal wasaare, maaddaama aad tiraahdeen AMISOM-tii lagu waday in ay waddanka ka baxo hanna waardiyayso ciidankeena ma aamminayna e?! Yuu wasiirka amnigu wasiir u yahay, ma AMISOM?
Gunaandkii, uma muuqato ( iska daa in malxiisayntu wakhtiga loo qabtay ku soo dhammaata e) in doorasho madaxweyne ay ka dhacayso Muqdishadan la dalbaday in madaxtooyadeedii lakala dhex dhigo AMISOM, ee la yiri ciidankeenna kuma kalsoonin; xaalad abuurka intaas le’eg. Ma meeshaas baa doorasho madaxweyne lagu qaban karaa?